चोरी गरेको होईन, बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गरेका हौंः अध्यक्ष थामी - Edolakha
चोरी गरेको होईन, बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गरेका हौंः अध्यक्ष थामी
3 months ago/Wednesday, October 23rd, 2019
दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाको केन्द्र सम्वन्धि विवादले अहिले जिल्लाको राजनीतिलाई नैं तताईदिएको छ । अध्यक्ष बिनकुमार थामी समेतको समर्थनमा कालिन्चोक गाउँपालिकाका उत्तरी क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले मध्यराति गाउँपालिकाको सामान कव्जा गरेर लगेपछि केन्द्र सम्वन्धि विवाद उत्कर्षमा देखिएको छ । गाउँपालिकावाट कव्जा गरिएको महत्वपूर्ण कागजात र सामानलाई कालिन्चोकको वडा नम्बर ५ लापिलाङ लगेर नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षकै नेतृत्वमा नयाँ कार्यालय स्थापना गरिए पनि कर्मचारी र गाउँपालिकाका अन्य सामाग्रि भने अस्थायी केन्द्र सुनखानीमै छ । केन्द्रको बिषयलाई लिएर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुई खेममा विभाजित हुँदा गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चाल र विकास निर्माणका कामहरु समेत अवरुद्ध हुने अवस्था देखिएको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर सहकर्मी करुणा बस्नेतले कालिन्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिनकुमार थामीसँग गरेको कुराकानी ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद फेरि दोहोरियो । यो विवाद पटक–पटक किन भइरहन्छ ?
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद दोहोरिएकै छैन । कालिञ्चोक गाउँ कार्यपालिकाको दुई तिहाई मतबाट हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र सम्बन्धी निर्णय पारीत गरीसकेका छौँ । कालिञ्चोक गाउँपालिका साविक ६ वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको हो । ति मध्ये पाँच वटा गाउँ विकास समितिले कालिञ्चोक गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र लापिलाङमा हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयलाई हामीले गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतले पास गरेका छौँ । यो विवाद पटक–पटक दोहोरिएको होइन । अहिले चाँही कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो ।
तँपाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष अनि रातारात गाउँपालिकाको महत्वपुर्ण कागजातहरु ताला फोडेर तपाँईकै घरगाउँमा लान मिल्छ र भन्या ?
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको केन्द्रको सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयनको पटक–पटक प्रयास भएको हो । रातारात होइन, यो पटक विहानीपख कालिञ्चोक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु र जनताहरुले सामान लगेका हुन् ।
राति ताला तोडेर गाउँपालिकाका कागजात लैजाने विषयमा तपाँईको पनि समर्थन देखियो । जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो हर्कत गर्नु नियम सँगत हो ?
हैन हैन, त्यो मेरो समर्थन भन्दा पनि जनताको हो । किनकि म जनताले मतदान गरेर विजयी भएको जनप्रतिनिधि हुँ । जनतालाई सेवा दिने हिसावले यस्तो गरिएको हो । कालिञ्चोक गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र वडा नम्बर ८ मा छ । त्यो तपाई पत्रकारको आँखाले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । मेरा जनताहरु तारेभिरमा बस्नुहुन्छ, कोही सुन्द्रावतिको मानेडाँडामा बस्नुहुन्छ । त्यसो भएको हुँदा सवैलाई केन्द्र पर्ने स्थानमा जनप्रतिनिधिहरुले लानु भएको हो ।
त्यसो भए, तपाई र तपाईंको पक्षमा रहेका जनप्रतिनिधिको माग र एजेन्डा चाँही के हो ?
हाम्रो एजेन्डा भनेको हामीले गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र स्थापना गर्नु हो । हामीले अहिलेसम्म गाउँपलिका बस्ने आफ्नै भवन पनि निर्माण गरेका छैनौँ । अहिले हामी स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा बसीरहेका छौँ । कालिञ्चोक गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट सवै जना त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ । हामीलाई कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा जनताहरुले १० रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको कार्यालय राख्नका लागि दिनुभएको छ । जसमध्ये साँढे ७ रोपनी जग्गा पास पनि भइसकेको छ । बाँकी जग्गा पास गर्ने क्रममा छौँ । त्यसो भएको हुनाले राय, सल्लाह, सुझावका आधारमा यस्तो गरिएको हो । लापिलाङमा कालिन्चोक गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना भईसकेको छ ।
कालिञ्चोक गाउँ कार्यपालिकाको दुई तिहाई मतबाट हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र सम्बन्धी निर्णय पारीत गरीसकेका छौँ । कालिञ्चोक गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट सवै जना त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ । हामीलाई कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा जनताहरुले १० रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको कार्यालय राख्नका लागि दिनुभएको छ । जसमध्ये साँढे ७ रोपनी जग्गा पास पनि भइसकेको छ । बाँकी जग्गा पास गर्ने क्रममा छौँ । त्यसो भएको हुनाले राय, सल्लाह, सुझावका आधारमा यस्तो गरिएको हो । लापिलाङमा कालिन्चोक गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना भईसकेको छ ।
अनि विधि र प्रक्रिया सम्बद्ध तरिकाले गाउँपालिकाको केन्द्र सारे हुन्न र ?
हैन, यो विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत नै सरेको हो । त्यो भएको हुनाले यसलाई अन्यथा मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तपाईहरुले सामान चोरेर लगेको आरोप छ नी यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
चोरले कहिले पनि सामान लगेको भन्दै । जुन साथिहरुले सामान लगेर जानुभयो उहाँहरुले मलाई पनि सूचना दिनुभयो । तमाम् जनताको रायसल्लाह सुझाव अनुसार लगेको बिषयलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो बिषयमा हामीले डिएसपीलाई पनि जानकारी गराएका छौं । हाम्रा साथिहरुले सबैलाई जानकारी गराएका गराएका छन् ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिले कार्यालय चोरी भएको भनेर उजुरी दिए भने के हुन्छ ?
कानुन सम्बद्ध कुरा हो र जनताको कुरा पनि हो । उपाध्यक्ष होस् वा अध्यक्ष हामी जनप्रतिनिधि हौंँ । जनताको भावना अनुरुप काम गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति हामी मतदानबाट विजयी भएका हौं ।
जनप्रतिनिधि नै विवादीत भएर दुई पक्षमा विभाजित भएको र विवाद चर्किएका बेला अब कालिञ्चोक गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र दैनिक प्रशासनिक काम कसरी अघि बढ्छ ?
हाम्रो काम दैनिक रुपमा प्रशासनिक काम अगाडि बढ्छ । हाम्रो काममा कति पनि अवरोध आउने छैन । यसलाई हामिले अगाडि बढाउने छौं ।
त्यसो भए गाउँपालिकाको काम अब सुनखानी बाट हुन्छ की लापिलाङबाट ?
हजुर, जनताले जहाँ सार्नुभएको छ त्यहीबाट काम हुन्छ ।
६ कार्तिक २०७६ । ३ः१५ बजे प्रकाशित
VIEWS: 14140 पटक हेरीएको